ဒေါ့ခယူမန်ထရီ (Documentary) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Poetry » ဒေါ့ခယူမန်ထရီ (Documentary)	14
Posted by သူရဿဝါ on Jul 9, 2012 in Poetry | 14 comments
- သူရှဿဝါ -
စပျစ်သီးပဲ ချဉ်ရင်ချဉ်မယ် ချိုရင်ချိုမယ်
ကြိုးတွေဟာ တစ်စပြီးတစ်စ ရစ်လိုက် ပတ်လိုက်
အခုလို မိုးတွေ စွေနေခဲ့မှာပဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်
ချိုချဉ်ဖန်ခါး အရသာက ထုံတယ် ကျဉ်တယ်
ရဲရဲစွေးစွေး ပွင့်ပစ်လိုက်ဖို့ အဖြူရောင်သစ္စာပန်းတွေ
စောင့်နေ အတိအကျ လမ်းပေါ်မှာ မိုးတွေစွေနေ
လွတ်လပ်ငှက်များ အမှန်တရားမိုးသားပေါ် စီးနင်းလိုက်ပါဖို့
အတောင်မကျိုးဖို့ မုန်တိုင်းအတုနဲ့မတိုးဖို့ စပျစ်သီး အရှိအတိုင်း
ချဉ်ဖို့ ချိုဖို့ အမှောင်ထဲလမ်းမမှားဖို့ လူမှုရေး စီးပွါးရေး နိုင်ငံရေး
လူပြိန်း ဗာလာန လူ့အန္ဓများ ။ ။
၉ – ဇူလိုင် – ၂၀၁၂
မောင်ပေ says: ဒေါ့ခယူမန်ထရီ
maung khinmin says: ဆြာပေရေ…နမော်နမဲ့အမှားတစ်ခုက…
Wow says: ထောက်ခံပါတယ်…. စပျစ်သီးပဲချဉ်ချင်ချဉ်မယ် ချိုချင်ချိုမယ်….
“ဘောင်” ထဲက သနားစရာ ထိုးထွက်ချင်စိတ်မရှိသူတွေအတွက် ပန်းချီတစ်ချပ်လောက်တော့ အချိန်ရရင် ဆွဲပေးချင်ပါတယ်…
mamanoyar says: ဖတ်ပြီး ယောင်ချာချာနဲ့ပြန်သွားပါတယ်
maung khinmin says: မြန်မာဖြစ်ဖြစ်..ဗမာဖြစ်ဖြစ်
Thu Ra Tha Wah says: ကျွန်တော် ဘာများမှားလို့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3395
အရီးခင်လတ် says: မှတ်ချက်တွေ က ဒီလို ဘဲ Post နေရာမှား ပြီး ထားတတ်ကြတယ် မောင်သူရသဝါ ရေ။
ကြည့်ရတာ ကိုခင်မင် လဲ နေရာမှား ပို့ မိပုံရတယ်။
ဒီလိုလွဲလွဲ လေးတွေ တွေ့ရတာ ရီမိလို့ ခေါင်းရှုပ် နေတာ သက်သာသွားပါ၏။ မှတ်ချက်ပေးသူရော၊ ပြန်မေးသူ ကိုပါ ကျေးဇူးပါ။
မင်းရဲ့ စာကဗျာ ကို တော့ မမှီမကမ်း နဲ့ ကြိုးစား ဖတ်သွားပါတယ်။ ;-)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8243
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မောင်သူရရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9977
မောင်ပေ says: ဟေ့လူကြီး
ကျွန်တော့်အဒေါ်ကို ဘယ်သူ့ကိုပေးရမှာလဲခင်ဗျာ” က ကျုပ်ကို မဟုတ်ဝူး
maung khinmin ကို မေးထားတာဗျ
Thu Ra Tha Wah says: ဟုတ်ပါတယ် ကိုမောင်ပေ
အဲဒီမောင်ခင်မင်ဆိုတဲ့လူဟာ ကိုမောင်ပေရေးသွားတဲ့ comment ကိုအခြေခံပြီး ပြန်ကိုးကားရေးတာလား
ဒါမှမဟုတ် .. ကျွန်တော့်ခေါင်းစဉ်အထားအသို အရေးအသားကို ဘဝင်မကျလို့ ရေးသွားတာလားဆိုတာ ကျွန်တော် စိတ်ထဲမရှင်းပါ
ကိုမောင်ပေကို ကျွန်တော် Reply လုပ်တာမဟုတ်
မောင်ခင်မင်ကို Reply လုပ်တာပါ
maung khinmin says: ကျွန်တော့်မန့်ကြောင့်ကိုသူရ..စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်…အလွန်စိတ်မကောင်း
Was this answer helpful?LikeDislike 26
Thu Ra Tha Wah says: အကြောင်းစုံသိရလို့ ကျေနပ်ပါတယ်
ကျွန်တော် ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် အားလည်းနာသွားပါတယ်
Was this answer helpful?LikeDislike 828
ကြောင်လေး says: အမှားပေါ်ကိုအမှားတွေထပ်ဆင့်နေပါရော့လား၊
အရီးခင်လတ်တစ်ခါထပ်ဖတ်မိရင် ၊တစ်ကြိမ်ထပ် ရီ(ရယ်)ရဦးတော့မပေါ့။
Mလုလင် says: ကိုယ့်ဆြာ ရေ .. ကန်ဘောင်က “တကယ်ဆို အခြောက်ပဲ လိုတယ်” က စပြီး သတိထားမိရာက နေ ….. သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ သိကျွမ်းရင်း .. အဲ့ ကန်ဘောင်ဇာတ်လမ်းက မင်းသား နဲ့လဲ အတူတူ သောက်ဖူးသွားခဲ့ပေမယ့် . ကိုယ့်ဆြာ သမားနဲ့တော့ မစုံဖြစ်လိုက်ဘူး။ အရင် က ဖတ် ရရင် .. ဟာသ တွေ သရော်စာ တွေပဲ များပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် တော့ အတည်ပေါက် ပိုစ့် မှာ ပျော်စေပျက်စေ ကလက်စေ comment တွေကြောင့် .. တကယ်ကို ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဆြာ အဒေါ်လဲ ..မျက်ခုံးတော့ လှုပ်သွားမှာဗျို့ ..။ ဆိုတော့ မန့် ရင်းနဲ့ တခါတည်း မိတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ လေးစားပါတယ် ဗျို့  ။
Comments By Postဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - ကြက်အူလှည့် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - Ma Ma - San Hla Gyiပုညကြိယာဆယ်ပါး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - အရီးခင်လတ်စိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - Ma Ma - မောင် ပေမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Ma Ma - အရီးခင်လတ်ခရီးသည်လေးသို့ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - လင်းဇော် ထက်မွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - BMTM Mdy - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - cobra“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorစည်တော်ကြီး - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်ဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - TNA - naywoon niအတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ရာမည - Foreign Residentလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - KZ - lele kyiရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalayEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62237 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59261 Kyats )MaMa (58031 Kyats )Top Posts & Pagesစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး )